Sika Dwa Kofi - Wikipedia
Asanteman frankaa a Sika Dwa Kofi ɛda mfinfin.
Sika Dwa Kofi, a potɔfoɔ frɛ no "Golden Stool" no, ɛyɛ Asantefoɔ ahenie ne wɔn Adehyedie dwa. Na ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛkyerɛ tumi a ɛwɔ Asanteman. Okunini Ɔkɔmfo Anokye, na na ɔyɛ Ɔkɔmfo Panyin, na ɔsan ɛka atitire baanu a wɔtee Asanteman Nkabomkuo no. Ɔno na ɔfrɛɛ Sika Dwa no efirii wiem ma no besii Asantehene a ɔdikan, Osei Tutu ɛserɛ so. Saa berɛ no mu no, na ahenwa bi saa ɛdan amammerɛ ahyɛnso soronko a ɛfa ɔhene biara amamuo ho, nanso dodoɔ no ara gyidi sɛ Sika Dwa Kofi ɛyɛ ahyɛnso bi a na Asantefoɔ - wɔn a wɔte aseɛ, wɔn a wáwu ɛne wɔn a afei na yɛrebɛwo wɔn nyinaa homhom ɛwɔ mu.
Sɛnkyerɛnne ne Nyankomade[sesamu]
Dodoɔ nteaseɛ kyerɛ sɛ, ahenwa biara yɛ ne wura kra, na sɛ ɔnte so a, yɛde si ban ho ma akra afoforɔ a wɔretwam tena so ɛgye wɔn ahome. Sika Dwa Kofi yɛ adehyedie ahenwa a enni ho kwan sɛ ɛka fam dabiara da. Ne saa nti, wɔde si adasoɔ so. Sɛ wɔresi hene a, wɔpagya no kɔ soro ɛde no sensɛn Sika Dwa no so, ɛberɛ a wɔmma neho nka. Wɔpagya Sika Dwa no wɔ sumeɛ ɛde kɔkyerɛAsantehene, na ɔno nko na ɔwɔ ho tumi sɛ okura Sika Dwa Kofi no mu. Sɛ yɛbɔ dwa kɛseɛ a, wɔde Sika Dwa Kofi esi Hwedɔm dwa no so, ɛde si Asantehene benkum so; na wɔde Sika Dwa no ani kyerɛ Ɔmanfoɔ no
Ntawantawa ɛwɔ Abakɔsɛmu[sesamu]
ɔko bebree na asɔre ɛfa deɛ Saa ahendwa yi yɛ ne dea. Wɔ 1896, wɔ tuu Asantehene Prempeh 1 ɛsan sɛ na wɔ mpɛsɛ wɔbɛ hwere ɔkoo ne adwa no abomu. Wɔ 1900, ɔwura Frederik Hodgson a na ɔyɛ aban mu panin wɔ Gold Coast, hyɛɛ sɛ wɔmfa no ntena Sika dwa no so na ɔhyɛɛ sɛ wɔn nhwehwɛ bɛɛbia Sika dwa no wɔ. Wei hyɛɛ asradɔm bi nom abufuo a wɔfrɛɛ no Sika dwa ko, ɛnam wei so maa wɔsii Asanteman kwan wɔ ngrɛsi abrɔfo ahenie no nanso wɔbɔɔ Sika dwa no ho ban. Wɔ 1921, abibifoɔ bi a wɔyɛ akwan hunuu adwa no na wɔ wiaa Sika kɔkɔɔ a ɛwɔ ho no bi. Ngrɛsi abrɔfo de wɔn kɔsieɛ ansa na wɔbuaa wɔn kumfɔ sɛdeɛ mmra teɛ. Ngrɛsi abrɔfo dii agyenamu maa wɔtware wɔn asuo a wɔankum wɔn. Ngrɛsi abrɔfo hyɛɛ bɔ sɛ wɔ ne adwa no nya twaka biom ɛnti wɔ yi firii asieɛ. Wɔ 1935, wɔde adwa no dii dwuma wɔ afahyɛ bi a wɔde hyɛɛ Osei Tutu Agyeman Prempeh II hene.
Appearance and craftsmanship[sesamu]
Sika dwa tenten yɛ 46 cm, ne tɛterɛtɛ yɛ 61cm na ɛmu dɔ kɔsi 30cm. Wɔde Sika kɔkɔɔ na adwira ho na adɔma sensɛn ho sɛ ɛbɛbɔ ɔhene no kɔkɔ wɔ bɔne bi a ɛrebɛba. Nipa pii nhunuie na ɔhene, ɔhemaa, ɔhene ba barima trodoo ne afutufoɔ a wɔgye wɔn di na ɛnim bɛɛbi a wɔde asie. Wayɛ ne nsɛsoɔ ama ahenfo na wɔ Ayie ase wɔde mmoa mogya yeyɛ ho. Adwa no yɛ agyinasoɔ ma Asanteman ɛnɛ ɛsan sɛ ɛkyerɛ tumi ne nnidisoɔ.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Sika_Dwa_Kofi&oldid=21003"